Bislr: ọgụgụ isi Marketing OS | Martech Zone
Fraịde, Septemba 13, 2013 Douglas Karr
Bislr a na - emeputa ngwa ohuru ha, Autopilot, nke na - agwakọta SaaS ịdọrọ na dobe usoro akpaaka azụmaahịa yana ọtụtụ atụmatụ nke usoro ịkpaaka ahịa siri ike. Ọ bụ usoro dị ọnụ ala nke na-egosi na ọ karịrị ụfọdụ ndị ibu arọ na ụlọ ọrụ ahụ nwere interface dị ọcha karịa na njikọta na atụmatụ siri ike karị. Gụnyere gụnyere ahịa akpaaka, mwekota CRM, ịre ahịa email, peeji ọdịda, ịde blọgụ, nyocha A / B, njikwa ọdịnaya na nsonaazụ oge na nyocha.
Detailsfọdụ nkọwa na isi atụmatụ nke Bislr:
Ọchịchị Social Lead - Nweta nri oge na-agwa gị otu atụmanya ga-esi tinye na saịtị gị yana ihe ha debere na Twitter na LinkedIn. Jikọọ ozi a ruo ọkacha mmasị gị CRM usoro (Salesforce, NetSuite). Nweta ọgụgụ isi ịchọrọ iji meziwanye ego.
Ibe akwukwo - Enweghị IT ma ọ bụ coders chọrọ na Ntugharị Ntugharị ewuru na. Nwalee isi okwu na visuals dị iche iche ma chọpụta ihe na-arụ ọrụ. Na Bislr, nyocha A / B abụghị nhọrọ dị oke ọnụ - ọ na-abịa ọkọlọtọ. Sochie nsonaazụ site na mkpọsa ma ọ bụ site na ibe ọdịda.
Mgbasa Ozi Webinar - Mmekọrịta na GoToMezukọ nke na-azọ ahịa ahịa ngwa ahịa ahịa dị elu na-efu $ 150k na elu. Jirichaa aha gị na webinar ọdịda peeji nke na-anọdụ na saịtị gị, ọ bụghị nke ha.
Idu nurturing mkpọsa - Authodebanye ikike mbu nke nurturing mkpọsa ịdọrọ na dobe mfe. Na ngwaọrụ dị elu nke na-eme ka enweghị ndu na-ahapụ.
Saịtị Mgbasa Ozi - Ngwa ịdọrọ-na-dobe na-enye gị ohere ịmepụta saịtị ị chọrọ n'ejighị IT. Ebe nrụọrụ mkpọsa ị mepụtara na-abịa zuru oke na mmeghachi omume na-emeghachi omume, na-eme ka ọ dịrị na atụmanya gị na ndị ahịa gị na smart phones na mbadamba.
Ihe omimi di omimi - Wepụta nrụpụta dị elu, kpọọ oku ka emee ihe. Tinye otu na njedebe nke blọọgụ ọ bụla. Tụgharịa atụmanya n'ime ndu yana Bislr Intelligent Marketing OS, n'oge.